သူကအဖြူဆို ကိုယ်ကအမဲ (Black and White နှင့် စပ်လျဉ်းသော expression များ) - Myanmar Network
သူကအဖြူဆို ကိုယ်ကအမဲ (Black and White နှင့် စပ်လျဉ်းသော expression များ)
Posted by Myanmar Network on December 9, 2014 at 13:44 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Black and white ဆိုတဲ့ အဖြူရောင်နဲ့ အမည်းရောင်တို့ဟာ အမြဲတမ်း ဆန့်ကျင်ဘက် နေရာတွေမှာ ရှိကြပါတယ်။ အဖြူရောင်ကတော့ ဖြူစင် သန့်ရှင်းတယ်။ အမည်းရောင်ကတော့ မည်းညစ် ဆိုးယုတ်တယ်ပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း စကားလုံးတွေကို အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။
ရှေးရှေးတုန်းက အမေရိကန် ကောင်းဘွိုင် ရုပ်ရှင်တွေမှာ လူကောင်းနဲ့ လူဆိုးတွေကို အဖြူရောင်ဦးထုပ် white hat ၊ အမည်းရောင်ဦးထုပ် black hat တွေ နဲ့ ရည်ညွှန်းပြီး ဆိုလိုချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဖြူ အမည်း ဖလင်ကို သုံးပြီး အသံတိတ် ရုပ်ရုင်ကို ရိုက်တဲ့အခါ ပရိသတ်တွေအလွယ်တကူသိရအောင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာက မင်းသားကို ဦးထုပ်အဖြူ ဆောင်းစေပြီး လူဆိုးတွေကို ဦးထုပ်အမည်း ဆောင်းစေပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်ထားတော့မှ ဇာတ်လိုက် ဘယ်သူ ၊ လူဆိုး ဘယ်သူ ဆိုတာ ကလေးကအစ အလွယ်တကူ ခွဲသိနိုင်တာပေါ့နော်။ 'Hat' ဆိုတာလူ ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒီလိုဘဲ black hat နဲ့ white hat ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေမှာ black နဲ့ white တို့ဟာ hat ကို အထူး ပြုပြီး အကောင်းနဲ့ အဆိုးကို ခွဲခြား ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုခေတ်မှာတော့ black hat တို့ white hat တို့ဟာ ရုပ်ရှင်လောကမှာတော့ မရှိတော့ပေမဲ့ ယနေ့အထိ လူကောင်းနဲ့ လူဆိုး bad guys and good guys တွေ အကြောင်း ပြောရာမှာ သုံးကြပါသေးတယ်။ ကွန်ပြူတာဟက်ကာချင်းတူရင်တောင် black hat hacker ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ ကွန်ပြူတာဟက်ကာလူဆိုးဖြစ်ပြီး white hat hacker ဆိုရင်တော့ ကွန်ပြူတာလုံခြုံရေး ဘယ်လောက်ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်ပြီး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပြီး အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြရတဲ့ ကွန်ပြူတာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူလို့ပြောတာပါ။
ဒီလိုဘဲ လူဆိုးကို ဖေါ်ညွန်းတဲ့ နောက်စကားလုံး တစ်ခုက black sheep ဖြစ်ပါတယ်။ Black sheep ဆိုတာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့အစည်းက လက်မခံတဲ့ အပြုအမူ၊ အကျင့်တွေရှိတဲ့သူကို ခေါ်ပါတယ်။ လူဆိုးပေါ့။ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းကို မျက်နှာပျက်စေတဲ့သူကို black sheep တနည်းအားဖြင့် သိုးမည်းလို့ ခေါ်ကြတာပေါ့။ မိသားစု တစ်ချို့မှာ ဆိုးသွမ်းလို့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း တွေကနေ ဝိုင်းပယ်ထားတဲ့ သိုးမည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ဗဒင်က "သိုးမဲဟောင်းကြီးတွေ" လို့သူ့သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ ထည့်ဆိုထားတာအမှတ်ရကြမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ black ဆိုတိုင်း အဆိုးချည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Black ကို အချို့ ကောင်းတာလေးတွေ ဖေါ်ပြဖို့လည်း သုံးပါတယ်။ ဥပမာ “in the black” လို့ဆိုရင် အခြေအနေ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ သုံးတဲ့ business expression တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကုမ္ပဏီက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်နေတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
Example: A business that makesaprofit is in the black.
ဒီ expression က ငွေစာရင်းကိုင်တွေ လုပ်ငန်းအရှုံးအမြတ် စာရင်းအင်းကို ပြုစုရာမှာ သုံးစွဲတဲ့ မှင်အရောင်ကနေ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ အမြတ်စာရင်းကို မှင်အနက်နဲ့ မှတ်ရတာ ဖြစ်ပြီး ၊ အရှုံးစာရင်းတွေကိုတော့ မှင်အနီနဲ့ မှတ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အကယ်လို့ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးက “in the red” လို့ဆိုရင် လုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်နေပြီလို့ ဆိုလိုတာပေါ့။
The internet café has been in the red ever since mobile phone internet became widely used. (မိုဘိုင်းဖုံးတွေနဲ့အင်တာနက်သုံးလို့ရသွားထဲက အင်တာနက်ကဖေးတွေ ခွက်ခွက်လံရှုံးတယ်)
White ဆိုတာ ကောင်းတာကို ဖေါ်ညွှန်းတာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ “White collar job” ဆိုတာ ဥာဏလုပ်သားကို ခေါ်တာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရှာဖွေ နေကြတဲ့ အလုပ်အကိုင်မျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ White collar job ဆိုတာ ရုံးခန်းစားပွဲမှာ ဦးနှောက်ကို သုံးပြီးလုပ်ရတဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ Blue collar job ဆိုတာကတော့ ကာယကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ရတဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ရတာလည်း ပင်ပန်းပါတယ်။ White collar job က blue collar job ထက် လစာ ပိုရလေ့ ရှိပါတယ်။ ကြားထဲက ဟိုမရောက် ဒီမရောက် grey collar worker တွေဆိုတာလည်းရှိပါသေတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ white ဆိုတာကို မကောင်းတာကို ဖေါ်ညွှန်းတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက တစ်ခုကတော့ whitewash ဆိုတဲ့ expression ဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကာလတုန်းက whitewash ဆိုတာ ရုပ်ဆိုးတာတွေကို ပျောက်အောင် ၊ ကြည့်ကောင်းအောင် ဆေးအဖြူနဲ့ အပေါ်ကနေ အုပ်ပြီးသုတ်လိုက်တာ၊ သန့်စင်အောင် လုပ်လိုက်တာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအခါ whitewash မှာ negative အဓိပ္ပါယ် တစ်မျိုးရှိနေပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ အမှားအယွင်းတွေ၊ ကျဆုံးမှုတွေကို ဖုံးဖိ ကွယ်ဝှက် ဖျောက်ဖျက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သတင်းစာထဲက သတင်းခေါင်းစဉ် တစ်ခုက ဒီလို ရေးထားမယ်ဆိုရင်..
The investigation ofatrain accident isawhitewash because investigations did not really try to discover who was responsible. အပြစ်ရှိသူကို ထုတ်ဖော်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ မလိုအပ်တဲ့ စုံစမ်းရေးတွေ လုပ်ပြီး အာရုံလွှဲနေတာလို့ ဆိုလိုခြင်းပါ။
တစ်ချို့ expression တွေမှာတော့ black နဲ့ white ကို အတူတူတွဲ သုံးကြပါတယ်။ ဥပမာ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို ဒီလို ပြောမယ်ဆိုရင် ..
“Your proposal sounds all right, but I want to see it in black and white.”
သူက သင့်ရဲ့ proposal ကို စာနဲ့ပေနဲ့ ရေးသားပြီး တင်ပြတာ (black ink on white paper) ကို တင်ပြဖို့ ပြောနေတာပေါ့နော်။
နောက်တစ်ခုက To see things only in black and white ဆိုတဲ့ expression ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ expression မှာ black နဲ့ white တို့ဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် အစွန်း၂ဖက်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး အလယ်အလတ်ဆိုတဲ့ နေရာ သူတို့ ကြားမှာ ရှိမနေပါဘူး။
Most issues in the world are not so simple as black and white.
ဆိုလိုတာက ပြဿဿ နာရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းက အားလုံးမှန်တယ်။ ကောင်းတယ် all white ချည်းဘဲ မဟုတ်သလို ၊ အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းမှာလည်း အားလုံးမှားတယ်၊ ယုတ်ညံ့တယ် all black ချည်းဘဲ မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့။
တစ်ကယ်လက်တွေ့လောကကြီးမှာ black နဲ့ white တို့ ရောပြွန်းပြီး အခြေအနေအမှန်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ‘grey area’ ဆိုတာ ရှိပါတယ်နော်။
Permalink Reply by Aung Win Naing on December 9, 2014 at 14:45
Permalink Reply by thinkhaingsoe on December 9, 2014 at 17:48
Right ! very useful
Permalink Reply by Dr Soe Thein Htike on December 9, 2014 at 18:18
Permalink Reply by Ko Oo on December 11, 2014 at 17:14
Workable in dialogues!
ှုIn addition to, please, I'd like to know that we can use or not "whitewash" in Myanmar usage: ခုတ်ရာတခြား၊ ရှရာတလွဲ. And another Myanmar usage: ပြဒါးတစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်း is in English usage: The attitudes of you and me are black and white. Isn't it?
Permalink Reply by Nyi Lwin on July 23, 2015 at 10:17
Permalink Reply by Aung Aung Myint Oo on March 23, 2016 at 11:36
Permalink Reply by Lu maw on March 23, 2016 at 20:45
Permalink Reply by htaylim on March 26, 2016 at 16:20
Permalink Reply by rosapan on March 28, 2016 at 11:27
Permalink Reply by Phyu Hnin Hlaing on March 28, 2016 at 16:54
Very useful !! Thanksamillion !